नेपालको नेताहरु कैले सुध्रिदैनन - यथार्थ खबर
Rojjan Raj Pandey १३ कार्तिक २०७८, शनिवार
मतदान गर्ने बेलामा जनता सुध्रिनु जरुरी छ। नभए एकदिन को गलत निर्णयले ५ बर्स रुनपर्ने छ।
बिगतको चुनाब को तालमेल कम्युनिस्ट आन्दोलन ससक्त बनाउन न भै स्वार्थमा प्रधानमन्त्री हुने र अकुत कालोधन थुपार्ने योजना रहेको देखियो फलस्वरूप सरकार नै ढलेको उदाहरण हामी सामु छ।
नेपालमा एक राज परिवारले एस गरेको देखिए पछि तेस्को रिसमा गणतन्त्र ल्याइयो आज हरेक दलका नेताहरु राजा बनेको छ्न। एस्तो बेबस्था ल्याउनेल आम नागरिक लाई अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भनेर भ्रम फैलाएर आफ्नो दुनो सोजाउनैकै लागि गणतन्त्र ल्याएको पनि काम गराइ र बेबहारले स्पष्टता भएकै छ।
योबेबस्थाले को सर्बसाधारण बेक्तिको उथान भएको छ? कुन निमुखा जनताको गाँस बास कपासको र उच्च शिक्षाको सुनिस्चितता भएको छ? महङिले ४ बर्स अधिको भन्दा ३ सय प्रतिशत वृद्धि भएको छ। पुर्ब सरकारले काला ब्यापारीहरुलाई नै सरकारमै सामेल गराइ मूल्य वृद्धि गर्ने छुट दिए। निजि कम्पनिलाइ पोस्ने सरकारी बायुसेवालाइ डुबाउने काम गरियो।
दुर संन्चारमा पनि तेहि अबस्था छ। बेथितिले देश चरम उत्सर्गमा पुगेको छ। सबै धनी र नेता कर्मचारीले यो देशलाइ धमिराले खाएको जस्तो गरि शोषित गरिएको छ।
पुर्ब प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सम्म देश भक्त प्रधानमन्त्री थिए । तेस पछिका नेताहरु एक जनामा रास्ट्रियताको भावना शून्य भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु देखिनु देशको लागि अत्यन्तै गंभिर र हानिकारक बिसय बनेको छ।
देश एस्तै गतिमा गए यो देशको सिस्टम फेल हुने देखिदै छ। हरेक बिसयमा राजनीति घुसेको छ देश बिकास गर्ने कुरो का छ था छैन कसरी भ्रष्टाचार गरि संपती कमाउने र आफ्नो सन्ततिको उच्च भबिस्य सुनिस्चित गर्ने मनसाय बाहेक केही गरेको कसैले देखिएन। हरेक बिसयमा लैनचौर धाउने हाम्रो नेताहरु माथिल्लो कर्मचारीहरु नेताहरु मन्त्री बन्न समेत उतैको इसारा र कृपा पाउनु पर्ने अबस्था रहेको तथ्यहरु छ्न।
एस्तै प्रवृत्ति आउदो चुनाव पछि बन्ने सरकारले पनि तेहि दोहोर्‍याए बेथिति न रोके भ्रष्टाचार अन्त्य नगरे परनिर्भरता कम न गरे आम नागरिकलाई शोषित गरि आफ्नो दुनो सोज्याउने काम मात्रै गरे भने अर्को जनआन्दोलन हुने र यो गणतन्त्रनै फालिने पक्का छ।
बिस्वमै यो देशमा जति बढिकर लिने कुनै देश छैन कर लिए बापत सुबिधा केही छैन। आम नागरिकले जीवन धान्न गाह्रो परेको छ काम गरिखाने बाताबरण छैन हरेक मन्त्रालय अड्डा मा घुस न खुवाइ काम हुदैन। लाग्छ नेपाली नेपाली एक अर्कालाइ घात गरिरहेको एकले अर्कालाइ लुट्न उद्द्त रहेकोछ्न र भाइचाराको कुनै मुल्य रहेको पाइदैन।
देशमा ब्यापक अराजक अबस्था भै सकेको छ। एस्तै अबस्था रहे नेपाल पनि अफगानिस्तानकै लाइनमा जाने संकेत देखिएको छ । एस्तो कुरिती कु संस्कार बेथिति भ्रष्टाचार महङी न रोके यो बेबस्थालाइनै खाने दिन आउदै छ उच्च तहका नेताहरुको बुद्धिमा किरापरेको छ त्यो किरा निकाल्ने भनेको आम जनताले आउदा दिनमा मतदान गर्दा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
मासु र रक्सी स्वास्थको लागि हानिकारक त छनै देशको लागि पनि हानी हुने देखिन्छ मासु र रक्सिमा न बिकौ। हाम्रोलाइ हैन देशको उन्नति गर्ने नेतृत्व चुन्ने कि?